गुरुदत्त तिमीले जित्यौ… | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेका मोदीले ढाका टोपी लगाएर कसको मन जित्न खोजे ?
यसरी चम्किए ह्याट्रिकका हिरो नवयुग →
बिध्यार्थी जीवनको जिक्री तिमी केही समय पहिला फेशबुकमा जोडीन पुग्यौ । यद्दपी कुनै कुराकानी हुन पाएको छैन । चिटिक्क ढाका टोपीमा सजिएको तस्बिर अनी उही बिद्यार्थी जीवनमा देखिने तिम्रो मन्द मुस्कानले पुन. मलाई हाम्रो बिद्यार्थी जीवन लाम्तुनमा बिताएको समयमा फर्काइदियो । अतिनै भिरालो बाटो साउने झरी होस् या बर्खाको भेल, चैतको गर्मी होस् या पुष महिनाको तुसारो हामीलाई कुनै फरक पर्थेन । बिहान एक डोको घास काटेर तातै खाएर उकालो बाटो हामी हिन्थ्यौ भने तिमी आनन्दले हामी थकित भएर हिन्दै गर्दा घरबाट ओरालो झरेर मुल बाटोमा मुस्काउदै मिसिन्थ्यौ ।
धेरै समय पछी केही बर्ष पहिला गाउमै जादा हाम्रो भेट भएको थियो त्यो पछी खासै भेट भएन तर पनी बिद्यार्थी जीवनका धेरै साथीहरु बिस्तारै संपर्कमा आएका छन । लाम्तुन पढ्दाको बिद्यार्थी जीवनमा टिउरेको जय अंकलको दोकान अनी सानैदेखी तिम्रो घडी, रेडियो, क्यासेट र वाकमेन प्रतीको लगाब सबै बिषयसँग भएको हाम्रो काहानी निकै रमाईलो अनी सम्झन लायक छ । टेक्निकली तिमी यती पोख्त थियौ त्यो बेला एउटा वाकमेनको बेट्री राख्ने स्प्रिङ्ग लुज हुँदा गहुको गेडाले बिचको ग्याप पुरा गर्थ्यौ र बलियो बनाउथ्यौ आज म त्यस्तै टेक्निकल काममा १२ बर्ष बिताए र धेरै त्यस्ता काम गरे जस्ले तिम्रो याद दिलाउने गर्दछ । उकालो पछी आउने तिम्रो तोरीबारीको फुल धेरै नासियो बिचरा बैनीले दाई कती मात्तेको अर्काको तोरीको साग खाने भन्थिन माओवादी युद्धमा सदाहत प्राप्त गरिन भन्दा धेरै दु:ख लागेको थियो । जिन्दगीका धेरै रमाईला पल बितायौ बिद्यार्थी जीवनमा त्यसैले आज यो बिरानो ठाउँबाट तिमीलाई सम्झदै छु । लाहुरे हुने चाहना भएका साथीहरु लाहुरे भए कोही पेन्सन आए भने हिमान अब आउँदै छन । कोही कता कोही कता सबै बिरानो अनी जन्मथलो शुन्य भयो भन्नु पनि बेकार झै लाग्छ ।
जिक्री सानै देखीको टेक्निकल मान्छे तिमी आज जती प्रगती गरेउ त्यसैले पुराएको हो तिमीलाई । न तिमी परिवार बिना तड्पिन्छौ न तिमीलाई पाखा पखेरा बिरानो भाका छन न जन्मदाताको मायाबाट बन्चित छौ हरेक पक्षबाट हेर्दा तिमीले आफ्नै ठाउँमा बस्दा जे गर्ने सोच गरेउ तेस्मा सफल भयौ र भबिस्य उज्यालो छ तसर्थ भन्छु तिमीलाई तिमीले जितेउ यार अनी सफल पनि छौ… आत्म सन्तुष्टी ठुलो बिषय रहेछ शायद त्यो अरुमा हुन सकेन वा धन सम्पत्ति, ठुलो घर शहरमा वा लाखौं पैसा बैंकमा होस् भन्ने चाहना सबैमा होला तर पनी कतीसम्म त्यो बिषयमा गहिरिने भन्ने बिषय मान्छे अनुसार फरक हुने रहेछ । सबै बिषय हेर्दापनी तिमी हरेक पक्षमा सबल छौ भन्ने सुन्दा खुशी लागेको छ । बजारिया बसाईबाट गाउ जादा तिम्रो घरतिर हेर्छु अनी निकै याद आउछ है बिगतका सबै पलहरुको ।
फेशबुकमा जोडीएका सबैले तिम्रो याद गर्छन् अनी ठिकै छन भन्ने सुनेको छु भन्दिन्छु । केही समय पहिला बेलायत बाट गंगा ले सोध्दा तेही भने आशा गर्छु सबै राम्रै होला । तिम्रो बसाई नजिकै भएपनी के भो के भेट हुनै सकिएन यो सबै समयको कमाल भन्दापनी मैले आफ्नो कमजोरी मान्छु किनकी समय धेरै मिलाउन सक्दिन । सबै साथीहरुले सम्झना गर्दैनन होला तर किन किन यार निकै याद आउछ हो बिद्यार्थी जीवनका हरेक पलहरुको । जिक्री समयको चक्र रमाईला पलहरु याद गर्दै गर्दा चुम्लुक्क सुर्य समुन्द्रको क्षितिजमा डुब्न लाग्यो । ब्यापारिक जीवनमा फुर्सदिलो भयौ भने संपर्क गर्ने कोशीश गर्नु । सम्पूर्ण परिवार लाई आरामै होला भन्ने कामना गर्दछु । साचै २ साल पहिला गाउबाट पोखरा फर्कदा ठुलो छोरीलाई बसमा भेटेको थिए। ठुलि भएकी छोरीपनी साह्रै खुशी लाग्यो । शक्तिकी देवी शिरमाथी राखेर बसेका छौ यार पक्कैपनी कोटकी देबी ले तिम्रो सदा रक्षा गर्नेछन । आफ्नो खेयाल गर्नु ।
उही तिम्रो जिक्री अर्जुन कुवेत बाट